Fiaraha-miasa ho amin’ny fifidianana: manampy eo amin’ny fampitaovana sy ny vola ny iraisam-pirenena | NewsMada
Fiaraha-miasa ho amin’ny fifidianana: manampy eo amin’ny fampitaovana sy ny vola ny iraisam-pirenena
Manao tohivakana. Tsy mitazam-potsiny fa mitondra ny anjara birikiny amin’ny hanaovana ny fifidianana ny 7 novambra izao ny avy amin’ny fianakaviambe iraisam-pirenena. Eo ny fanohanana amin’ny lafiny vola fa eo koa ny fampitaovana. Manampy izany ny fanaraha-maso ny ho fizotry ny fifidianana.
Anisan’izany ny iray hetsy dolara avy amin’ny Vondrona afrikanina (UA). Nitondra ny anjarany sady fanampiany ho amin’ny efa nomeny koa ny Frantsay. Mitentina 100 000 dolara izany raha 500 000 euros kosa ny avy amin’i Norvezy. Harotsaka ao amin’ilay tahiry fanohanana ny fifidianana (Sacem) izany.
Mpanara-maso avy amin’ny UE sy Sadc
Nitondra ny fanohanany amin’ny fampitaovana kosa ny fitondrana sinoa. Nanolotra moto sy ordinatera miaraka amin’ny kojakoja samihafa, miisa 10 avy, ho an’ny Ceni, ny ambasadaorony, i Yang Xiaorong.
Efa nialoha lalana amin’ny fanaraha-maso ny fififidianana kosa ny avy amin’ny UE. Efa eto ireo andiany voalohany nijery akaiky ny fampielezan-kevitra, midina eny an-kianja. Manampy ireo ny fanaraha-maso ataon’izy ireo amin’ny andron’ny fifidianana sy ny aorian’ny latsa-bato. Tahaka izany koa, vao tonga tamin’ity herinandro ity ny mpanara-maso avy amin’ny Sadc. Midika ireo fa tsy mihemotra, araka ny fitakiana, na fivoizan’ny sasany azy, na koa tonga hatrany amin’ny famendrofendroana ny vahoaka ny fifidianana.
Nivoaka amin’ny fanginany ny Amerikanina
Mazava rahateo ny hafatry ny solontenan’ny Pnud eto amintsika, i Violette Kakyomya, teny Andraharo ny herinandro lasa teo. “Ilaina ny fanajana ny lalàna sy ny lalàmpanorenana. Aoka hatao ao anatin’ny fitoniana sy filaminana ny fifidianana”, hoy izy.
Nahitsy koa ny Amerikanina, amin’ny alalan’ny mpirakidraharahany eto amintsika, i Stuart Wilson, fa zava-dehibe ny fanajana ny lalàmpanorenana. Notebahiny ankolaka ireo mieritreritra ny hanemotra ny fifidianana. “Mihevitra izahay fa mahafa-po ny lisi-pifidianana sady efa nankatoavin’ny Frankofonia (OIF). Tokony hohajaina ny datim-pifidianana efa voafaritra. Mivaona amin’ny lalàmpanorenana indray ny fanokafana io lisi-pifidianana io sy ny fanemorana mety haterak’izany”, hoy izy.